बच्चाहरु को लागी हुप्स को सेट शिल्प मा
जेनी मोंगे | | शिल्प, गत्ता शिल्प, बच्चाहरूको लागि शिल्प, रिसाइकिलिंग
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्प मा चलो कसरी बच्चाहरु संग यो घेरा खेल बनाउन को लागी हेर्नुहोस् र त्यसपछि मनोरञ्जन समय प्रतिस्पर्धा र परिवार संग खेल्दै खर्च।
के तपाइँ यो कार्य कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ?
1 सामग्री छ कि हामी छल्ले को हाम्रो सेट बनाउन को लागी आवश्यक छ
सामग्री छ कि हामी छल्ले को हाम्रो सेट बनाउन को लागी आवश्यक छ
भान्छाको कागज वा दुई शौचालय कागज को एक गत्ता रोल।
तातो ग्लू जस्तै तातो सिलिकॉन।
रंगीन मार्कर वा रंग को कुनै अन्य प्रकार को गत्ता मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पहिलो कदम हो कार्डबोर्ड मा सबै टुक्राहरु काट्नुहोस्। हामी धेरै रिंगहरु को जरूरत को लागी जाँदैछौं, धेरै जसो हामी साँच्चै चाहन्छौं। हामी उनीहरुलाई दुई वा तीन फरक रंगहरु मा बनाउन सक्छौं, ताकि परिवार को प्रत्येक सदस्य को आफ्नो झुम्का हो। हामी एक ठूलो सर्कल वा वर्ग पनि काट्नेछौं।
सर्कल वा ठूलो वर्ग को केन्द्र मा हामी भान्छा कागज को रोल छडी जाँदैछौं। दुई शौचालय कागज को उपयोग को मामला मा, हामी दुई रोल एक साथ एक लामो बनाउन को लागी एकसाथ गोंद गर्नेछौं, हामी उनीहरुलाई कागज मा लपेटन सक्छौं ताकि उनीहरु अधिक संलग्न रहन्छन्। हामी एक तातो सिलिकन जस्तै बलियो गोंद संग रोल गोंद हुनेछ।
एक पटक हामी सबै टुक्राहरु लाई काटेर टाँसिएको छ, सजावट सुरु गरौं। हामी सर्कल को आधार र रंग मा रोल को रंग हामी रुचाउन सक्छौं वा तिनीहरूलाई अनपेन्ट छोड्न सक्छौं। पछि, सबैले आफ्नो आफ्नै झुम्काहरु लाई सजाउन सक्छन् किनकि उनीहरु लाई सबैभन्दा राम्रो लाग्छ। यस तरिका मा, प्रत्येक एक खेल को बेला समस्या बिना उनीहरुलाई फरक गर्न को लागी आफ्नो व्यक्तिगत रिंगहरु हुनेछ।
एक पटक हामी खेल तयार छ, यो हो खेल सुरु गर्न समय। हामी आफैंलाई चुनौती दिन मात्र एक खेल्न सक्छौं। हामी धेरै व्यक्तिहरु खेल्न सक्छौं, प्रत्येक एक एक औंठी फ्याँक्न जब सम्म कागज को रोल भरिएको छ र तब गणना गर्न को लागी अधिक रिंगहरु फिट गरीएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » बच्चाहरु को लागी हुप्स को सेट
मोती संग जादुई wands
सजिलो सजावटी बोहो चित्रकारी